FL Studio | January 2020
Isi FL Studio
Esi na FL Studio mepụta egwu na kọmputa gị
Ọ bụrụ na ọ na-agụ gị agụụ maka ịmepụta egwu, mana echeghị n'otu oge ahụ ọchịchọ ma ọ bụ ohere iji nweta ụda egwú, ị nwere ike ime nke a na FL Studio. Nke a bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma ịmepụta egwu nke aka gị, nke dịkwa mfe ịmụta na iji.
Ịwụnye mgbakwunye maka FL Studio
Ọtụtụ mmemme maka ịmepụta egwu enweworị mmetụta dị iche iche na ngwaọrụ dị iche iche. Otú ọ dị, ọnụọgụgụ ha dị ntakịrị ma ghara ikwe ka iji njirimara niile nke usoro ihe omume ahụ. Ya mere, enwere ntinye ntanetị nke atọ maka uto ọ bụla, ọtụtụ nke ị nwere ike ịzụta na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị mmepe.
Otu esi eji FL Studio
FL Studio bụ usoro ihe egwu egwu, nke a ghọtara dịka otu n'ime ihe kachasị mma na mpaghara ya, ma, ọ dịghị ihe ọzọ, ndị ọkachamara na-eji ya eme ihe. N'otu oge ahụ, n'agbanyeghị na akụkụ nke pro, onye ọrụ na-enweghị uche nwere ike iji ọrụ ọrụ dijitalụ a n'enweghị ihe ọ bụla.
Ịgwakọta na Mastering na FL Studio
Ịmepụta ihe ọkpụkpọ egwu zuru ezu na kọmpụta, nke a kwadebere maka usoro ihe omume a (DAW), usoro a dị ka oge na-ewe dịka ịmepụta egwu site n'aka ndị egwu na-eji egwu egwu na ụlọ ọrụ ọkachamara. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ gaghị ezuru naanị ịmepụta (ndekọ) akụkụ niile, mkpịsị egwú, tinye ha n'ụzọ ziri ezi na windo nchịkọta akụkọ (sequencer, tracker) wee pịa bọtịnụ "Save".
Otu esi tinye ihe atụ na FL Studio
A na-ele FL Studio anya dị ka otu n'ime ọrụ ọrụ ntanetị kacha mma n'ụwa. Ihe omume a na-ewu ewu na-ewu ewu n'etiti ọtụtụ ndị na-akụ egwú, ọ bụrụkwa na ọ dị mfe ma dị mma, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịmepụta ihe ọkpụkpọ egwú ha.
Dekọọ olu na FL Studio
Mgbe ị na-edekọ okwu ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ọ bụghị naanị ngwa ngwa, kama ịhọrọ ezigbo usoro maka nke a, ebe ị nwere ike ime usoro a. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha na ị nwere ike ịdekọ na FL Studio, isi ọrụ ya dabeere na ịmepụta egwu, mana enwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike idekọ olu.
Na-eme a remix na FL Studio
Ịmepụta ụda bụ ohere dị ukwuu igosi ikike ịmepụta ihe na ikike iche echiche n'egwú. Ọbụna ochie, egwu niile echefuru, ma ọ bụrụ na achọrọ ya, na ike nke ya ị nwere ike ime ihe ọhụrụ. Iji mepụta ụda, ịkwadoghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwa ngwa, ị ga-achọ ịnweta kọmputa na FL Studio arụnyere na ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © FL Studio 2020